Golis iyo Radio Daljir oo Garowe kusoo gaba-gabeeyay Tartankii Dugsiyada sare | Golis Telecom Somalia
Golis iyo Radio Daljir oo Garowe kusoo gaba-gabeeyay Tartankii Dugsiyada sare
Xaflad lagu soo gunaanadayay barnaamijka Tartan iyo Tacliin ee bishii Ramadaan qabato Radio Daljir islamarkaana ay maalgalinaysay shirkadda isgaarsiinta Golis ayaa lagu qabtay jaamacadda Bariga Africa xarunteeda magalada Garowe.
Waxa ka qayb galay xafladda masuuliyiin sare oo dhinacyo kala duwan kasocotay waxana kamid ahaa gudoomiyaha gobalka Nugaal C/laahi Ciise Aw Axmed Wasiirka wasaaradda Warfaafinta Puntland Maxamuud Xasan Soocade Wasiirka ku xigeenka Wasaararadda Waxbarashada Puntland Dr Maxamed Cali Faarax Maareeyaha guud ee shirkadda Golis Telecom Siciid Aadan Axmed iyo masuuliyiin kale oo isugu jiray labada gole ee xukuumadda Puntland.
Tartankan oo loo qabto sanad walba bisha Ramadaan dugsiyada sare ee Puntland laguna tartansiiyo cilmiga qaybihiisa kala duwan ayaa waxaa sanadka isugu soo haray wareegga kama dambaysta labada dugsi ee Alnawaawi oo ku yaala caasimadda Puntland ee Garowe iyo dugsiga Mumtad’a ee dagmada Buurtinle kuwaas oo si toos ah xalay loogu tartansiiyay hoolka ay munaasabaddu ka dhacaysay.
Baratankii aqoonta ee xalay dhex maray labada dugsi ayaa waxaa ugu dambayn guushu dhiniciisa noqotay dugsiga sare ee Mumtad’a ee dagmada Buurtinle kaas oo noqday sanadka hogaanka dugsiyada sare ee Puntland.
Shacab iyo dabaal dag loo muujiyay dugsiga koobka qaaday kadib waxaa la gudagalay barnaamij ay shirkadda Golis ugu talagashay inay la wadaagto martisharaftii soo xaadirtay munaasabadda kaas oo ahaa bakhtiyaanasiib qofka lagu waydiinayo su’aalo la xiriira adeegyada shirkadda Golis islamarkaana uu ku guulaysanayo abaalmarino ay kamid yihiin Mobilo, dhar noocyo kala duwan isugu jira, qalabka lagu kaydsado xogaha electronica ah iyo hadiyado kale oo qaali ah.
Intaas kadib waxaa la guda galay khudbadaha masuuliyiinta waxana madasha ugu horayn ka hadlay gudoomiyaha gobalka nugaal C/laahi Ciise aw axmed kaas oo u hambalyeeyay labad dugsi ee heerka kama dambaysta ah soo gaaray oo uu xusay inay yihiin dugsiyo magac usoo jiiday gobalka Nugaal madama labaduba ay yihiin gobalka Nugaal.
Wasiirka Wasaaradda Warfaafinta Puntland isaguna waxay uu sheegay inuu ku faraxsanyahay inuu ka qayb galo barnaamijkan oo ku tilmaamay mid waxtar u leh dhalinta reer Puntland waxa uuna u mahadceliyay cid walba oo kaalin ka qaadatay hirgalintiisa isagoo si gaar ah u xusay shirkadda isgaarsiinta golis Telecom oo uu ku tilmaamay shirkad aan ka daalin garab istaaga bulshadeeda.
Maareeyaha guud ee shiradda Golis Telecom Somalia ayaa dhankiisa u hambalyeeyay dugsiga guushu raacday isagoo intaas kadib sheegay in Golis ay aad u dhiirigaliso mar walba kor u qaadida tacliinta iyo arrimaha bulshada ayna sii wadi doonto ka shaqaynta barnaamijyada lamidka ah Tartan iyo Tacliin.
Si kastaba ha ahaatee xafladdan ayaa kusoo beegmaysa xili dhawaan ay ka dhacday magaalada Boosaaso xaflad lamid ah oo lagu soo gabgabaynayay tartankii xaafadaha Puntland oo ay isagana Golis maalgalinaysay.